Ukupaka imoto ngamanzi angcolile: izici
Ukuzibandakanya, Amathuluzi nemishini
I-pump yezimoto zamanzi angcolile kunezici ezithile, ezihlobene nokwenzeka kokusebenza neziphuzo eziqukethe ukungcola okuningi okunamaqenjana amakhulu kakhulu.
Uma sikhuluma ngenhloso esebenzayo yocingo elinjalo, kungumbuzo wokumpompa uketshezi olunezicucu ngaphansi kwengcindezi. Ipompoli yephethiloli yamanzi angcolile yiyona ndlela enhle kunazo zonke kokubili kokusebenza nokulingana, ngoba ubukhulu balezi zingcingo abuyingcosana. Kusukela ekubukeni kwezomnotho, lokhu kuyindlela engcono kakhulu, ngoba ikuvumela ukuthi ulondoloze kuphethiloli. Ngaphandle kokusetshenziswa kwasekhaya, amaphampu emoto afanele ukukhipha izidumbu zamanzi, kanye nokuxosha iziphuzo uma kwenzeka isimo esiphuthumayo noma isimo esiphuthumayo. Umsebenzi wakhe uphumelela kakhulu.
Ipompo yezimoto yamanzi angcolile ingabizwa ngokuthi umsele ojwayelekile noma ipompo. Kodwa-ke, lapha kukhona umehluko othile, oqukethe umgomo womsebenzi. Amapompi asebenzisa ama-motors kagesi, futhi amaphampu ngamagesi amaphampu. Ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwephethiloli kuphela kuqinisekisa ukuthi kungenzeka ukudonsa udaka nezixuku ezinodaka, amanzi ezindaweni eziyinkimbinkimbi kakhulu, lapho kungekho ugesi.
Udaka lwamafutha ompompo luyiyunithi ethembekile yokusetshenziswa ezimweni ezimbi kakhulu, alwesabi ukungena kwamanzi ezinyunithi zokusebenza. Uma ukhetha lolu hlobo lwemishini, udinga ukucabangela amandla nokusebenza, okungukuthi, unquma ukuthi lezi zimingcele zizokwazi yini ukuxazulula imisebenzi eyabelwe yona.
Lezi zixhobo azikwazi ukubizwa ngokuthi ezishibhile, ngakho kufanele zikhethwe ngokuziphendulela. Ngokwemvelo, ipharamitha ebaluleke kakhulu kulolu cala ukugeleza nekhanda: ngokuvamile amadivaysi aklanyelwe ukusebenza ngamanzi angcolile, aphakeme kunabo bonke abanye. Ngakho-ke, la maphampu anesisindo esikhulu, kanye namasayizi amakhulu amakhulu. Ngakho-ke, uma ukhetha kubalulekile ukucabangela ubukhulu bedivaysi, ngokuvamile efinyelela ku-70 kg noma ngaphezulu. Uma udinga ukuhamba, kungcono ukukhetha inketho elula, noma ucabange ukuthi iyiphi enye indlela ongayisebenzisa ukuyithutha.
Impompi yamanzi ngamanzi angcolile ibonakala ngezici zayo eziphezulu. Ngokuvamile lenziwe ngensimbi enzima kakhulu. Ngenxa yalokhu, ingasetshenziswa kakhulu kuzo zonke izimo. Izici zokwakhiwa kwempompo zivumela ukuhamba kwezinhlayiyana kufinyelele ku-30 mm ububanzi. I-motor pump ipetroli, imfundo ehlale ihlanganiswe (kodwa kunconywa ukuhlola ukutholakala kwayo ngesikhathi sokuthenga), inezinga eliphansi lomsindo emsebenzini, okungahle kuthathwe ngokuthi elinye lezinzuzo zalo. Izindleko eziphansi zezinto ezinjalo zihlanganisa izindleko zikaphethiloli ekusebenzeni.
Ukwakhiwa komcengezi: ukubuka konke, izinhlobo kanye nokubuyekezwa. Igridi ye-facade yokubeka
I-Mortise lock - umlondolozi othembekile wendlu yakho
Isimiso esiyisisekelo se-heater amanzi: incazelo, idivayisi, izinhlobo kanye nokubuyekezwa
Amasondo e-Crane. Ukukhiqizwa
Isikebhe somshini wokushisa: izinhlobo, izici
Indlela yokubopha umgodi egumbini ngaphandle nangenhlawulo
Eyesibili impi e Chechnya
Indawo Alexander Yanovsky isicebi engqondweni?
Montale Roses Musk: ukubuyekezwa, izincazelo ukunambitheka. Perfume Kwabesifazane
"I-Volga", iZelenodolsk (sanatorium): incazelo nokubuyekeza
Amafutha kakhukhunathi: umkhiqizo wezitho zomzimba jikelele
Flu ngaphandle imfiva. Yiqiniso ejwayelekile futhi atypical lesi sifo
Kuyini friform Wabasaqalayo
Russian State University of ukuvakasha kanye Service (RSUTS): ukubuyekezwa, ikheli, amandla